Fahalalahàna miteny · Marsa, 2022 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Marsa, 2022
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Marsa, 2022
Hetsika lehibe fandikan-teny Shinoa: Mampihanjahanja propagandy Shinoa sa manaparitaka fankahalana?
Azia Atsinanana 29 Marsa 2022
Manahy ny sasany fa ny fandikana teny fankahalana ao amin'ny media sosialy Shinoa dia hiteraka fihetseham-po manohitra ny Shinoa eo amin'ny fiarahamonina tandrefana, ny hafa kosa mino fa afaka manohitra ny fampielezan-kevitra Shinoa izany.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 28 Marsa 2022
Mpandraharaha Shinoa iray monina ao Odessa any Okraina no nivadika ho bilaogera manana ny fomba fijeriny manohitra ny fanafihan'ny Rosiana, nefa voasivana sy notafihana tao amin'ny media sosialy Shinoa.
Rahonan'ny masoivoho Rosiana ao Skopje horaiketina ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fironana ofisialy an'i Kremlin, lazaina ho ‘Russophobes (mankahala Rosia)’
Ady & Fifandirana 17 Marsa 2022
Ny masoivoho Rosiana any Makedonia Avaratra no hany tany Balkana namoaka indray ny fampitandremana avy amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Rosiana fa "voarakitra tsara an-tsoratra" ny tranga “Russophobia (fankahalana Rosiana)”.
Nahoana no tsy nahomby ny fanondroana ny laingan'ady Rosiana ao amin'ny Weibo?
Azia Atsinanana 14 Marsa 2022
Miantehitra amin'ny fampielezan-kevitra Rosiana ho loharanom-baovao lehibe amin'ny vaovao momba ny krizy Okraina i Shina. Mandràra ny mpifanohitra Sino-Rosiana sy ny fanambarana manohitra ny ady ny torolalana momba ny sivana. Nalaza be ny fanoharana fitiavana telozoro.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 05 Marsa 2022
Nentin'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny bemidina ilay bilaogera, tsy nampahafantarina ny fiampangana azy na ny toerana misy azy akory ny fianakaviany. Niseho tao amin'ny fonjan'i Evin malaza ratsy izay nitazonana azy tamin'ny taona 2010 izy taty aoriana.